I-China Juda i-kiln - iitoni ezili-100 / inkqubo yemveliso yosuku -Iprojekthi yeprojekthi ye-EPC kunye nabavelisi | Yuda
I. Ukubaluleka kokuPhuhlisa iTekhnoloji eNtsha yeKiln yeLime yanamhlanje
I-Lime iyona nto iphambili kunye neyona nto incedisayo kwimveliso yensimbi, imveliso ye-calcium carbide, imveliso ye-refractory, imveliso ye-alumina. Ngokukodwa kwixesha elitsha, iteknoloji entsha, iimveliso ezintsha ziqhubeka nokuphuhlisa izinto ze-calcium zisetyenziswa ngokubanzi. Ukuziqhelanisa kubonakalise ukuba itekhnoloji yale mihla ye-lime kiln ngokwenene iyinzuzo yokwenene kwaye yindlela emfutshane yenzuzo eqaqambileyo kumashishini entsimbi kunye nentsimbi, amashishini e-calcium carbide, amashishini e-coking njalo njalo. Okwangoku, inzuzo ngetoni yekalika igqithise kakhulu inzuzo yeetoni zentsimbi, iitoni zentsimbi, iitoni ze-calcium carbide, iitoni zecoke. Amashishini asebenzise itekhnoloji yale mihla ye-lime kiln axhamle kakhulu, kwaye afumene inzuzo enkulu yentlalontle. Nangona kunjalo, amashishini amaninzi athintelwe lulwazi lolawulo lwemveli kunye nenqanaba lolawulo kwaye akakaphuhlisa ubuchwephesha banamhlanje bokuvelisa ikalika kwikiln basaxhomekeke kwimveliso yekalika yekiln. Ngoko ke, ukuba sifuna ukulawula ngokucokisekileyo ungcoliseko lweziko lokutshisa umhlaba, kufuneka sithembele ekuphunyezweni kweziko lekalika yanamhlanje ukusombulula ingxaki yemfuno.
Oko kubizwa ngokuba yiziko lobuchwephesha obutsha bale mihla yinkqubo yobunzululwazi yokubala ikalika enokhuseleko lokusingqongileyo, umsebenzi wokonga umbane, umatshini kunye nomatshini wokuzisebenzela. Kuba le nkqubo ithatha itekhnoloji ye-calcination thermal yanamhlanje, inokusebenzisa amandla ngokupheleleyo, ngakumbi irhasi engcolisa indalo njengomthombo wamandla kwaye ijike inkunkuma ibe bubutyebi. Oku akukhuseli okusingqongileyo kuphela, kodwa kukwavelisa umgangatho olungileyo kunye nekalika enexabiso eliphantsi. Iinzuzo zayo ezithe ngqo nezingathanga ngqo, izibonelelo zoqoqosho nezentlalo zibaluleke kakhulu. Oku kukubaluleka kokwazisa ngetekhnoloji entsha i-lime kiln.
2. Iindidi zeteknoloji ye-lime kiln yanamhlanje
Kukho izitofu ezixubeneyo nezibaso, oko kukuthi, isibaso esiqinileyo, icoke, umgubo wecoke, amalahle kunye neziko legesi. I-gas kiln ibandakanya i-blast furnace gas, i-coke oven gas, i-calcium carbide tail gas, igesi yesithando somlilo, igesi yendalo njalo njalo. Ngokwemilo ye-kiln, kukho i-shaft kiln, i-rotary kiln, i-sleeve kiln, i-Vimast kiln (i-West Germany), i-Melz kiln (eSwitzerland), i-Fucas kiln (eItali) njalo njalo. Ngaxeshanye, kukho i-kiln yokusebenza yoxinzelelo olulungileyo kunye ne-kiln yokusebenza yoxinzelelo olubi. Iziko elixubeneyo langoku eline-800 cubic metres ngosuku liphuma ngaphantsi kwe-500 kunye ne-oven yerhasi yanamhlanje ene-250 cubic metres, ngakumbi ukonga amandla kunye nokhuseleko lokusingqongileyo i-lime kiln kunye negesi yokuvutha kwegesi ye-oven ye-coke, iphuhlisiwe kwaye iyilwe. Uyilo kunye nokuveliswa kwe "lime kiln long flame burner" isombulule ingxaki evuthayo yexabiso eliphezulu le-calorific kunye nomlilo omfutshane wegesi ye-oven ye-coke, enokusebenzisa ngokupheleleyo igesi ye-oven ye-coke. Ukusuka kwi-original coke oven gas "ukukhanya", ukungcolisa imo engqongileyo ibe ngamandla axabisekileyo kumashishini ukwenza izibonelelo. Kumashishini amancinci kunye naphakathi kwentsimbi kunye nentsimbi, amashishini e-coking, amashishini e-calcium carbide, kunye ne-refractory industry are very good saveing ​​energy, ukhuseleko lokusingqongileyo, ukusebenza kakuhle kunye neendlela ezisebenzayo.
3.IMIGAQO ESISISEKO NENKQUBO YETEKNOLOJIA
Elona candelo le-limestone yi-calcium carbonate, ngelixa eyona nxalenye yekalika yi-calcium oxide. Umgaqo osisiseko wokutshisa ikalika kukubola i-calcium carbonate kwi-limestone ibe yi-quicklime ye-calcium oxide kunye ne-carbon dioxide ngoncedo lobushushu obuphezulu. Ifomula yayo yokusabela yile
Inkqubo yayo kukuba i-limestone kunye ne-fuel i-preheated kwi-lime kilns (ukuba i-gas fuel pipes kunye nezitshisi zondliwe) kwaye i-decarbonized kwi-850 degrees, i-calcined kwii-degrees ze-1200, emva koko ipholile kwaye ikhutshwe ngaphandle kwe-oven. Inkqubo yayo epheleleyo yokubala ilingana nokuqhutyelwa kwisitya esivaliweyo. Iimilo ze-kiln ezahlukeneyo zineendlela ezahlukeneyo zokufudumeza, ukubala, ukupholisa kunye neendlela zokuthulula uthuthu. Nangona kunjalo, eminye imigaqo yenkqubo iyafana: ukushisa kwe-calcination yi-850-1200 degrees, ukushisa kwangaphambili ku-100--850 degrees. Ubushushu bomlotha bungaphantsi kwe-100 degrees. Umgangatho wempahla ekrwada uphezulu, umgangatho wekalika ulungile; ixabiso le-calorific fuel liphezulu, ukusetyenziswa kobuninzi kuncinci; ubungakanani besuntswana lekalika bulingana nexesha lokubala; idigri yomsebenzi we-quicklime ihambelana ngokungafaniyo nexesha lokubala kunye nobushushu bokubala.
Ngaphambili: Juda kiln- iitoni ezingama-300/ngosuku zeX4 Lime eLuoyang, kwiPhondo laseHenan-EPC iprojekthi
Okulandelayo: INdibano yeLime Kiln Production Line
Ukwenza iCalcium Hydroxide, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, Ukwenza iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing, ICalcium oxide Production Line, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide,